Canada inoita kuti nhomba isungirwe kubato rekufambisa
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose » Kanada Breaking News » Canada inoita kuti nhomba isungirwe kubato rekufambisa
Airlines • nhandare yendege • avhiyesheni • Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Kuputsa Kufamba Nhau • Bhizinesi Kufamba • Kanada Breaking News • Hurumende Nhau • Health News • nhau • vanhu • Rail Kufamba • Kuvakazve • Kutarisirwa • ushanyi • kutakura • Kufamba Kwamugumo Kwidziridzo • Kufamba Wire Nhau • Trending Now
Kubvira Gumiguru 30, 2021, vafambi vanobva kuAirport nendege, uye vafambi veVIA Rail uye Rocky Mountaineer zvitima, vanozodikanwa kuti vachengetwe zvizere, kunze kwekushomeka kwakanyanya.
Canada inoda COVID-19 kubaiwa nhomba pane yese yeveruzhinji sevhisi uye federally inodzora zvikamu zvekufambisa.
Mutungamiri wehurumende, Justin Trudeau, uye Mutevedzeri weGurukota, Chrystia Freeland, nhasi vazivisa ruzivo rwehurongwa hwehurumende hwekuda kubayiwa nenjodzi dzeCOVID-19.
Vashandirwi mumakambani anotungamirirwa nemhepo, njanji, uye zvekufambisa zvemumvura zvichave kusvika Gumiguru 30, 2021 kuti vateerere.
Kubva pakutanga kwe COVID-19 denda, takaita kuzvipira kuchengetedza hutano nekuchengeteka kwevese maCanada. Ndokusaka takashanda nesimba kuendesa majekiseni akachengeteka uye anoshanda uye takagadzika danho rekupora kunobatsira munhu wese. Kutenda kumamirioni evaCanada vakaputira maoko avo kuti vabaiwe jekiseni, uye ikozvino ne82 muzana yeanokodzera maCanada akabaiwa zvakakwana, Canada mutungamiriri wepasirese pakubayiwa kweCCVID-19. Semushandirwi mukuru munyika, Hurumende yeCanada ichaenderera mberi nekutamba chinzvimbo chehutungamiriri mukuchengetedza kuchengetedzeka kwenzvimbo dzekushandira, nharaunda medu, nevanhu vese veCanada nekuona kuti vakawanda vavo vachengetedzwa zvizere.
The Mutungamiri, Justin Trudeau, uye Mutevedzeri weGurukota, Chrystia Freeland, nhasi vazivisa ruzivo rwehurongwa hwehurumende kuda COVID-19 kubaiwa kuyambuka yemubatanidzwa yeruzhinji sevhisi uye federally inodzora zvikamu zvekufambisa.
Pasi pemutemo mutsva, vashandi vehurumende mubazi reCore Public Administration, kusanganisira nhengo dzeRoyal Canadian Mounted Police, vanozodikanwa kuti vasimbise nzvimbo yavo yekubaiwa nhomba musi waGumiguru 29, 2021. jekiseni richaiswa pazororo rekutungamira pasina mubhadharo kutanga kwaNovember 15, 2021.
Vashandirwi mu federally inodzorwa mweya, njanji, uye zvekufambisa zvemumvura zvichave nemusi waGumiguru 30, 2021, yekumisikidza marongero ekudzivirira anoverengera kuti vashandi vabaiwa majekiseni. Kubvira Gumiguru 30, 2021, vafambi vanobva kuAirport nendege, uye vafambi veVIA Rail uye Rocky Mountaineer zvitima, vanozodikanwa kuti vachengetwe zvizere, kunze kwekushomeka kwakanyanya. Hurumende iri kushanda nemaindasitiri uye vakaroorana vakakosha kuisa zvinyoronyoro zvekudzivirira majekiseni panzvimbo yezvikepe zvegungwa isati yatanga mwaka we2022.
Makambani emakorona nemasangano akapatsanurwa ari kukumbirwa kuti ashandise marongero ekudzivirira miratidziro yezvinodiwa zvaziviswa nhasi kune vamwe vese veveruzhinji. Acting Chief weVashandi veDziviriro achaburitsawo rairo inoda kubayiwa nhomba yeCanada Armed Forces. Hurumende icharamba ichishanda nevashandirwi mune dzimwe nzvimbo dzekushandira dzakatarwa nemubatanidzwa kuti vaone kuti nhomba iri kukosheswa kune vashandi muzvikamu izvi.
Nekuda kubaiwa nhomba kubva kuvashandi vehurumende vehurumende, vafambi, uye vashandi munzvimbo dzinofambiswa nehurumende, Hurumende yeCanada ichaderedza njodzi yeCOVID-19, kudzivirira kuputika kwemunguva yemberi, uye zvirinani kuchengetedza hutano hwevanhu veCanada. Kubaya nhomba kunoramba kuchikosha kuhurumende sezvo isu tichishanda kuti tione kusimudzira hupfumi uye kuvaka Canada yakachengeteka uye ine hutano kune wese munhu.